समयमा, घर को निर्माण को अन्त, हामी सबै सुरु तरिका आफ्नो पर्खालहरु सजाउनु गर्ने बारे सोच्न। र सबैभन्दा लोकप्रिय प्रकार पर्खाल समाप्त आज छ बसाई सराई बसाई सराई। तर तपाईं यो सुरु गर्नु अघि, तपाईं एक crate बनाउन आवश्यक छ।
म बसाई सराई अन्तर्गत crate चाहिन्छ?
यो प्रश्न धेरै गर्न चासो छ। तर यो सबै आफ्नो इच्छा र सामाग्री को मूल घर मा सम्पूर्ण निर्भर गर्दछ। त्यसैले, आफ्नो घर लग वा काठ बनेको छ भने, तपाईं बस बसाई सराई पर्खालहरु गर्न कस्नु गर्न सक्नुहुन्छ। रूप प्रभावित हुने कुनै बाटो छ, र layman, lathing गरेको छ वा छैन बुझ्न छैन। तैपनि, विशेषज्ञहरु पर्खालहरु को समाप्त सुरु गर्नु अघि डिजाइन obreshetochnuyu प्रयोग गर्न सल्लाह। आखिर, कार्यक्रम इन्सुलेशन र धेरै तहहरू प्रयोग गर्नेछ waterproofing फिलिम। यो एकदम आफ्नो घर को ऊर्जा दक्षता बढ्छ। कि यो थप ताप लागत बिना भन्दा एकदम न्यानो हुनेछ, छ।
हामी यो गर्न
को बसाई सराई अन्तर्गत Crate दुई चरणहरु मा स्थापित छ। पहिलो चरणमा पूर्ण भित्ताहरू भरिएका छन्। टाइल्स, sills र बारहरू: त तिमी कुनै पनि फैलएको तत्व हटाउन आवश्यक हुनेछ। कसरी ठीक तपाईं सामाग्री हुनेछ। तर यो धातु एकदम अब हुनेछ टिप्पण लायक छ, र उहाँले काठ भन्दा धेरै बलियो छ। तर तपाईं रूख छनौट भने, यो आवश्यक विरोधी-फंगल लागूपदार्थ स्थापना अघि व्यवहार छ, र चीरना र चिप्स लागि ध्यान दिएर inspected। त्यो हुनु हुँदैन: यो सामाग्री को गरीब गुणवत्ता भन्छन्। दोस्रो चरण एंकरिंग फ्रेम मा। यो बसाई सराई के दिशा मा सुरक्षित छ कि छैन भनेर आधारमा सेट गरिनेछ। यसरी, यो तेर्सो माउन्ट गरिएको छ भने, काठ ठाडो विपरित राखिएको हुनुपर्छ, र। फ्रेम स्क्रू वा dowels एक घर बनेको छ, जो देखि सामाग्री आधारमा को माध्यम द्वारा पर्खालहरु संलग्न।
धातु माउन्ट बसाई सराई अन्तर्गत battens
धातु थप टिकाउ र लगाउने प्रतिरोधी रूख तुलनामा। यसबाहेक, यो हल्ला र गर्मी इन्सुलेशन, साथै जो फ्रेम मा कार्य कुनै पनि सामाग्री झूट जब deform गर्न गाह्रो छ। बसाई सराई अन्तर्गत धातु SHEATHING जंग गर्न प्रतिरोधी छ र समय परिवर्तन छैन, यसको ज्यामिति। एक रूपरेखा यस्तो अर्को फाइदा के यो असमान सतहहरु गर्न निश्चित गर्न सजिलो छ भन्न सकिन्छ। प्रोफाइल नै अलग आधा मीटर कम्तीमा canopies संग पर्खाल गर्न fastened छ। जब यो अनुमति दिन्छ बसाई सराई स्थापना एक plumb संग पर्खाल को सबै अनियमितताहरु सच्याउन। यो पर्खाल पूर्ण समतल छ हो।
काठ को बसाई सराई अन्तर्गत Crate
रूख - यो सबैभन्दा पर्यावरण-मैत्री र एकै समयमा सरल सामान छ। तर उहाँले पूर्ण अरूले समय बदलिएको थियो। तर, जबकि यो सबैभन्दा निर्माण मा लोकप्रिय छ। Crate मात्र ड्राई मौसम मा बसाई सराई अन्तर्गत fastened। त्यसपछि पट्टी सुक्खा रहने छ, र रूख भिजेको सुक्खामा सुरु गर्दा समय नेतृत्व हुँदैन। आखिर, नेतृत्व काठ, र त्यसपछि मुड बसाई सराई भने।
काम को परिणाम
अब तपाईं कसरी बसाई सराई अन्तर्गत crate बनाउन थाहा छ। तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ रूपमा, काम कठिन छैन, तर तपाईं यो आफैलाई गर्न सक्नुहुन्छ किनभने। मात्र सामाग्री को प्रकार प्रयोग गर्न, र धैर्य निर्णय गर्न आवश्यक छ।
ठोस सिढी - यसको भेरिएसनहरूमा र प्रविधी विनिर्माण
को सैंडविच प्यानल को मड्यूलर भवनहरु: फाइदा र नोकसान
सबैभन्दा सामान्य विकल्प - भित्री घर खत्म
कसरी plastushku शैली? कसरी आफ्नो हात plastushku राख्न
Antimoroznye थपिएको समाधान: विशेषताहरु
कसरी eBay मा पसिना चरण मिनी निर्देशनहरूद्वारा चरण
"श्रेष्ठ Iberotel क्लब Fanara" - मिश्रको छुट्टी, जर्मन गुणस्तर
सबै बारे माछा मार्ने: को अड्डा मा teetering
अँध्यारो पर्दे सिद्ध डिजाइन समाधान
दिन कर Inspectorate - यो छुट्टी के हो?
Postnatal समस्या: पेट कसरी कस गर्न?
विज्ञापन को इतिहास
लुगा धुने मेसिन सैमसंग पारिस्थितिकी बबल: वर्णन, विनिर्देशों, निर्देशन र प्रतिक्रिया
आफ्नो पासवर्ड vkontakte तपाईं कसरी थाहा छ?
एल्डरले पाण्डुलिपिहरू अनलाइन: खेल को लागि सिस्टम आवश्यकताहरु